IBoutique Penthouse ifulethi eVilla enegadi
I-98 sqm 2 amagumbi okulala e-attic abekwe kumgangatho we-2nd we-Family Villa eyakhiwe ngasekupheleni kweminyaka engama-40 kwinkulungwane ephelileyo. Abalala be-4 kumagumbi okulala ama-2 azimeleyo anamagumbi okuhlambela kabini. Ifumaneka kwindawo esembindini kodwa ngenxa yegadi encinci ejikeleze indlu, sisiqithi esizolileyo ngokwenene kulo lonke ixesha lonyaka. Uyilo lwaqanjwa nguMyili odumileyo kwaye umhlobiso wakhe wakhethwa ngononophelo, udibanisa izinto zoyilo kunye neefenitshala zentsapho kunye nezinto eziye zayinxalenye yobomi bam.
Le ndawo inegumbi elikhulu lokuhlala elivulekileyo elibandakanya igumbi lokuhlala elinendawo ye-Smart TV, indawo yokutyela kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. Indawo yokulala yohlulwe yipaseji, ejonge amagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlambela, eyokuqala inebhafu egcweleyo kunye neshawari, eyesibini, inenkonzo, inesinki enkulu, indlu yangasese, umatshini wokuhlamba kunye nerack yokomisa. I-master bedroom inebhedi ekhululekileyo ephindwe kabini cm 160 x 200, i-closet enkulu kwaye iza ne-32 "flat screen TV. Ukusuka kwigumbi kwakhona ufikelela kwi-walk-in wardrobe, exhotywe ngebhodi yoku-ironing kunye nentsimbi yomphunga. Igumbi lokulala le-2 linamabini amabini. iibhedi ezingatshatanga kunye netafile: yindawo ezolileyo yokusebenzela ngokukhululekileyo ngePC yakho !! Umabonakude ukhokele 32" ngokunjalo. I-wifi ye-intanethi yesantya esiphezulu yasimahla kuwo onke amagumbi. Omabini amagumbi okulala eza ne-Air conditioning.
Indawo yeVilla ikuvumela ukuba ufikelele kwiziko likaCirie ngemizuzu emibini uhamba. Isitalato esikhulu sibonelela ngazo zonke iinkonzo kunye neevenkile onokuthi uzifune. E-Cirie kukho ii-mall ezininzi kwimizuzu nje ukusuka endlwini.
Izifundo zegalufa, amadama okuqubha abucala nakawonke-wonke, iinkundla zeTennis zikuluhlu lweekhilomitha ezimbalwa.
Iindwendwe ziya kwamkelwa ngokungena buqu. Siza kubonelela ngalo lonke ulwazi oluyimfuneko, kodwa siya kuba nemfihlo epheleleyo. Sifumaneka iiyure ezingama-24 ngazo naziphi na iimfuno, ekubeni sihlala kwigumbi elikumgangatho ophantsi.